ပျို့မောင်ရဲ့ …… ရန်ကုန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ပျို့မောင်ရဲ့ …… ရန်ကုန်	10
ပျို့မောင်ရဲ့ …… ရန်ကုန်
Posted by အောင် မိုးသူ on May 25, 2015 in Creative Writing, Poetry | 10 comments
Kaung Kin Pyar says: မိုးတွင်း စောင်ခြုံကွေးချင်
ဆောင်းတွင်း မထ ချင်
နွေရာသီ အလုပ်မသွားချင်နဲ့…နာလဲ ချာချာလည်နေတာပါအေ..
အောင် မိုးသူ says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2395
aye.kk says: စိတ်ကိုအားပေး
မြစပဲရိုး says: ပျိုတို့မောင် ရေ …
. ပြောင်တို့ မေ များမှာလဲ ထိုနည်း၎င်း ပါဘဲ။
“စု” စည်းကာ ဝိုင်းကြပါတော့။
ခင်ဇော် says: ခု တလော ငွေတွင်းးကြီးး ရချင်တယ်..
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ပါ့…. ပျင်းထှာ ပျင်းထှာ…။
kotun winlatt says: လောကကြီးမှာ ပျင်းတဲ့လူတွေများလို့ တိုးတက်တာဆိုပဲဗျ
အောင် မိုးသူ says: အဲ့လိုရှိလို့လား။ စကားမစပ် ဒီကဗျာလေးက အပျင်းကဗျာလေးတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျား။
Mike says: .မိုးတွေကသည်း
အောင် မိုးသူ says: ဖိုက်တင်း!!!!!!!!!